DEG DEG:-Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Dowladda oo geeriyooday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xildhibaan Maxamed Maxamuud Boonow oo ka tirsanaa Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa saakay ku geeriyooday Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay.
Xildhibaan Maxamed Maxamuud ayaa waxaa la sheegay in maalmihii dambe uu xanuunsayay, isla markaana saakay uu geeriyooday, sida ay xaqiijiyeen Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka.
Allaha u naxariistee Xildhibaanka Maxamuud Boonow ayaa waxaa uu sidoo kale ahaa Wasiiru dowlihii Wasaaradda amniga Gudaha Xukuumaddii Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre.
Sidoo kale Marxuumka ayaa mar waxaa uu Wasiir kasoo noqday dowladda KMG aheyd ee Sheekh Shariif Sh Axmed, waxaana xusid mudan inuu ahaa Marxuumka ganacsade si weyn looga yaqaano degaanada Koofur Galbeed.
Mas’uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda Federaalka iyo Siyaasiyiin ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Xildhibaan Maxamed Maxamuud Boonow oo ku geeriyooday Magaalada Baydhabo.